Enwebeghị mmetụta Brexit zuru oke na njem ụwa
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Enwebeghị mmetụta Brexit zuru oke na njem ụwa
Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Akụkọ Ọchịchị • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • nzukọ • Iwughachi • Ịrụ ọrụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Ruo n'ókè ụfọdụ, ụlọ ọrụ ahụ ewepụla mgbọ Brexit n'ihi na nsogbu Covid kpuchie ma na-achịkwa ihe gaara abụ oge ezumike kacha elu nke oge Brexit.
Enwebeghị mmetụta zuru oke nke Brexit na ụlọ ọrụ njem nlegharị anya zuru ụwa ọnụ, na-ekpughe nyocha nke WTM London wepụtara taa (Monday 1 November)
Ụfọdụ ndị ọkachamara 700 sitere na gburugburu ụwa nyere aka na mkpesa Industrylọ Ọrụ WTM, wee jụọ ma azụmahịa ha enwetela nrụgide ọ bụla metụtara Brexit, ka ọ dị ugbu a.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (45%) kwuru na ha ahụbeghị ọdịiche ọ bụla na 2021 n'ihi Brexit. N'ime ndị ahụ kwetara mmetụta Brexit, azịza ya bụ ihe na-adịghị mma nke ukwuu. Naanị 8% kwuru mmetụta dị mma ma e jiri ya tụnyere 24% na-egosipụta ihe na-adịghị mma.
Ntụle ahụ, na-anọchite anya otu n'ime anọ (23%) nke ụlọ ọrụ ahụ, ejighị n'aka ma ọ bụ amaghị oke Brexit bụ isi ihe na arụmọrụ 2021 ha.
The UK eze hapụrụ European Union, na azụmahịa azụmahịa, na njedebe nke 2020. Otu isiokwu dị na Financial Times n'oge okpomọkụ a gosipụtara ihe isi ike dị na ikewapụ mmetụta Brexit na mmetụta COVID na UK plc na ụlọ ọrụ ụfọdụ, na-ekwu " Mmetụta akụ na ụba nke oria ojoo nke Covid-19 mebie foto ahụ na azụmaahịa na ọrụ. "
Nkwekọrịta azụmaahịa UK/EU ebutelarị ụfọdụ mgbanwe iwu ga-emetụta njem mbata na ọpụpụ n'etiti UK na mba ndị ọzọ so na ya. Ọtụtụ n'ime ndị na-ahụ maka ekwentị mkpanaaka na UK ekwuputala njedebe nke ịkwọ ụgbọ mmiri na-akwụghị ụgwọ maka ndị njem, dịka iwu chọrọ mgbe UK bụ akụkụ nke EU. Mgbanwe a ga-agbakwunye ọnụ ahịa njem maka ọtụtụ ma mebie ahụmịhe n'ime ebe maka ụfọdụ.
Okwu ndị nwere ike gbasara ụbọchị ngwụcha paspọtụ, akwụkwọ ikike ịnya ụgbọ ala, mkpuchi, ọkwa ndị ọrụ na ebe ntụrụndụ, ahịrị mbata na ọpụpụ na ọdụ ụgbọ elu, na ndị ọzọ, nwere ike ịdịgide n'ime afọ na-abịa, n'akụkụ okwu metụtara COVID-19.
A ga-enwekwa mmetụta Brexit/Covid jikọtara ọnụ na azụmaahịa yana ndị ahịa. Ndị na-ewe ndị ọrụ ga-adị iche, ebe mgbagwoju anya na-anọgide na-adabere na ụtụ isi na-agafe agafe, nkwụghachi ụgwọ, mmezu na ndekọ ego.